Ahlusunna oo ka hadashay Munaasabadii La Joojiyay - Awdinle Online
Ahlusunna oo ka hadashay Munaasabadii La Joojiyay
December 25, 2019 (Awdinle Online) –Ciidamo ka tirsan kuwa amniga dowlada Federaalka Soomaaliya ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa joojiyay Munaasabad qado Sharaf ah oo halkaas lagu qaban lahaa. taas oo lagu taageerayey 20 Xildhibaan ee Ahlusunna laga siiyey Xildhibaabannada Galmuduig.
Xildhibaan Shaacir Sheegow oo kamid ah Xildhibaannada Ahlusunna kasoo galay Galmudug ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay joojisey munaasabadaas,isla markaana Hay’adaha Amniga ay caburin ku haayaan Ahlusunna.
Xildhibaanka ayuu sheegay in shalay Hay’adaha Amniga ay ku wargeliyeen qabashada Munaasabadaas,hayeeshee tan ay u muuqato inay ka dambeyso Wasaaradda Arrimaha Gudaha .
Si kastaba Joojinta Munaasabaddan ayaa kusoo aadeysa, iyadoo Ahlusunna Waljameeca ay qaadaceen Shuruudaha kamid ah noqoshada Xildhibaanada Cusub ee Galmudug oo xalay ay soo saareen Guddiga Doorashada Galmudug.
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo soo gaaray Muqdisho:- (Sawiro)